Duubabka Dhaqanka Hiiraan oo Bayaan ka soo saaray dhismaha Golayaasha Deegaanka. - Jowhar Somali news Leader
Home News Duubabka Dhaqanka Hiiraan oo Bayaan ka soo saaray dhismaha Golayaasha Deegaanka.
Duubabka Dhaqanka Hiiraan oo Bayaan ka soo saaray dhismaha Golayaasha Deegaanka.
Kulan ay maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen intabadan duubabka dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa soo saaray bayaan digniin ah oo ku aadan dhismaha Golayaasha deegaan oo la doonaayo in qaar ka mid ah degmooyinka Hiiraan loo dhiso xilli ay jirto ammaan darro degmooyinka oo go’doonsan iyo beelaha oo aan weli si rasmi ah ugu heshiin dhibaatooyinkii dhex maray.
4. Odayaashu waxay is dul-taageen xaaladda deggenaan la’aanta siyaasadeed ee ka jirta gobolka, taas oo sababtay in dhowrkii biloodba mar la beddelo guddoomiyaha gobolka.
9. Wakiil Wabar Cabdi Xuseen Dagoodi.